ကုန်ကြမ်း Galantamine Hydrobromide အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူ - Phcoker
SKU: 69353-21-5 အမျိုးအစား: စမတ်မူးယစ်ဆေး
ကုန်ကြမ်း Galantamine Hydrobromide အမှုန့် (69353-21-5) ကဗီဒီယို
ကုန်ကြမ်း Galantamine Hydrobromide အမှုန့် (69353-21-5) ဖေါ်ပြချက်
ကုန်ကြမ်း Galantamine Hydrobromide အမှုန့် norbelladine ကနေဆင်းသက်လာတဲ့ benzazepine ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ GALANTHUS နှင့်အခြား AMARYLLIDACEAE တွေ့ရပါသည်။ ဒါဟာ GALLAMINE TRIETHIODIDE နှင့် TUBOCURARINE ၏ကြွက်သားသက်ရောက်မှု reverse ဖို့အသုံးပြုခဲ့ပြီးအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနှင့်အခြားဗဟိုအာရုံကြောစနစ်မမှန်များအတွက်ကုသမှုအဖြစ်ကိုလေ့လာခဲ့ပြီးတဲ့ cholinesterase inhibitor ဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ကြမ်း Galantamine Hydrobromide အမှုန့် galantamine ၏ hydrobromide ဆားပုံစံ, နာကိသုနှင့် anticholinesterase နှင့် neurocognitive-တိုးမြှင့်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူ Amaryllidaceae မိသားစုအများအပြားသည်အခြား Genera ၏မီးသီးများနှင့်ပန်းပွင့်ကနေဒြပ်သို့မဟုတ်သဘာဝအတိုင်းရရှိသောတစ်ကောလိပ်, တက္ကသိုလ် alkaloid ဖြစ်ပါတယ်။ Galantamine ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့် reversibly ဖြင့်အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် acetylcholine (ACH) ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်, acetylcholinesterase ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, galantamine ACH ၏ presynaptic လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် postsynaptic receptors ကိုသက်ဝင်စေခြင်းငှါအရာ, နီကိုတင်း acetylcholine receptors များအတွက် ligand ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အေးဂျင့်ပျော့နှင့်အလယ်အလတ်အယ်လ်ဇိုင်းမား 's ရောဂါအတွက် neurocognitive function ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်နိုင်ပြီးဆေးလိပ်သောက် relapse မြှင့်တင်ရန်ကြောင်း abstinence-သွေးဆောင်သိမြင်မှုရောဂါလက္ခဏာများကိုလျှော့ချစေနိုင်သည်။
ကုန်ကြမ်း Galantamine Hydrobromide အမှုန့် (69353-21-5) S ကpecifications
ထုတ်ကုန်အမည် ကုန်ကြမ်း Galantamine Hydrobromide အမှုန့်
ဓာတုအမည် Galantamin; Galantamine; Galanthamine
Galanthamine hydrobromide; ကုန်ကြမ်း Galantamine Hydrobromide အမှုန့်; 1953-04-4; Reminyl; Galanthamine (hydrobromide);
မူးယစ်ဆေးအတန်းအစား အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကိုယ်စားလှယ်, cholinesterase inhibitor
CAS အရေအတွက် 69353-21-5
InChIKey QORVDGQLPPAFRS-XPSHAMGMSA-N ကို
မော်လီကျူး Formula C17H22BrNO3
မော်လီကျူး Wရှစ် 368.271 g / mol
အရည်ပျော် Point 126-127 ကို C Deg
ဇီဝဗေဒတစ်ဝက်-ဘဝ ပပျောက်ရေးနေ့ဝက်ဘဝကို:7နာရီ
Solubility ပူပြင်းတဲ့ရေထဲမှာမျှမျှတတပျော်ဝင်; အရက်, acetone, chloroform အတွက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ဝင်။ benzene အတွက်လျော့နည်း sol, အီ။
Application cholinesterase inhibitor; ဆေး
ကုန်ကြမ်း Galantamine Hydrobromide အမှုန့် (69353-21-5) ဖျေါပွခကျြ
Galantamine Hydrobromide galantamine ၏ hydrobromide ဆားပုံစံ, နာကိသုနှင့် anticholinesterase နှင့် neurocognitive-တိုးမြှင့်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူ Amaryllidaceae မိသားစုအများအပြားသည်အခြား Genera ၏မီးသီးများနှင့်ပန်းပွင့်ကနေဒြပ်သို့မဟုတ်သဘာဝအတိုင်းရရှိသောတစ်ကောလိပ်, တက္ကသိုလ် alkaloid ဖြစ်ပါတယ်။ Galantamine ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့် reversibly ဖြင့်အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် acetylcholine (ACH) ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်, acetylcholinesterase ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, galantamine ACH ၏ presynaptic လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် postsynaptic receptors ကိုသက်ဝင်စေခြင်းငှါအရာ, နီကိုတင်း acetylcholine receptors များအတွက် ligand ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အေးဂျင့်ပျော့နှင့်အလယ်အလတ်အယ်လ်ဇိုင်းမား 's ရောဂါအတွက် neurocognitive function ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်နိုင်ပြီးဆေးလိပ်သောက်မြှင့်တင်ရန်ကြောင်း abstinence-သွေးဆောင်သိမြင်မှုရောဂါလက္ခဏာများကိုလျှော့ချစေခြင်းငှါ relapse.
Galantamine Hydrobromide အမှုန့် (69353-21-5လှုပ်ရှားမှု၏) ယန္တရား?
Galantamine တစ် phenanthrene alkaloid နှင့် Reversible လုပ်, အပြိုင်အဆိုင် acetylcholinesterase inhibitor ဖြစ်ပါတယ်။ တခြား acetylcholinesterase inhibitors မှဖွဲ့စည်းပုံဆက်စပ်မဟုတ်ပါဘူး။ လုပ်ဆောင်ချက် Galantamine ရဲ့အဆိုပြုယန္တရား cholinergic synapses မှာ acetylcholine တစ်ခုတိုးလာအာရုံစူးစိုက်မှုမှအဓိကဦးဆောင်, acetycholine ၏ Hydrolysis ကာကွယ်ပေးသည်ရာ acetylcholinesterase ၏ပြောင်းပြန်တားစီး, ပါဝငျသညျ။ Galantamine လည်းနီကိုတင်း acetylcholine receptors နှင့်အတူ allosterically ချည်နှောင်ခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်သည်ဤ receptors မှာ (ထိုကဲ့သို့သော acetylcholine ကဲ့သို့) agonists ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှု potentiate လိမ့်မည်။
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား of Galantamine Hydrobromide အမှုန့် (69353-21-5)
သိမှုက Function တိုးတက်ကောင်းမွန်
တစ်ခု antioxidant Is
Lucid အိပ်မက် Induces
သင်ကဆေးလိပ်သောက် Quit ကိုကူညီပါနိုင်ပါစေ
အကြံပြုထားသည် Galantamine Hydrobromide အမှုန့် (69353-21-5) သောက်သုံးသော
အလားတူထိရောက်မှုအဆိုပါ 16 မီလီဂရမ် / နေ့ထိုးနှင့်အတူကြည့်ရှုလေ့လာသည်နည်းတူ, Galantamine Hydrobromide အမှုန့် 24 မီလီဂရမ် / နေ့, ပျော့အေဒီနှင့်အတူလူနာတွေအတွက်အကောင်းဆုံးသောက်သုံးသောဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အလယ်အလတ်အေဒီနှင့်အတူလူနာ galantamine 24 မီလီဂရမ် / နေ့ကနေနောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးရရှိပေါ်လာ
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး of Galantamine Hydrobromide အမှုန့် (69353-21-5)
Galantamine Hydrobromide အမှုန့်များ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကြွက်သားကြွက်တက်နှင့်အားနည်းခြင်း, cardio-အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များ, အရေပြားပြဿနာများနှင့်ဆီးမထိန်းနိုင်ပါဝင်သည်။ ဖြည်းဖြည်းဆောမပါဘဲ Galantamine မြင့်မားဆေးများကိုယူပြီးလည်းအိပ်မက်ဆိုးများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဤအအကျိုးသက်ရောက်မှုများအပြင်, အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူ Galantamine ရဲ့အပြန်အလှန်ကျန်းမာရေးပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာတူညီတဲ့အသည်းလမ်းကြောင်း (Hepatic cytochrome စနစ်က) ကနေတဆင့် metabolized လုပ်ပြီးချေဖျက်ဖြစ်ကြောင်းအချို့နဲ့အခြားဆေးဝါးများယူပြီးသည့်အခါ Galantamine ၏အသုံးပြုမှုကန့်သတ်ရန်ရန်အကြံပြုထားသည်။
ကျေးဇူးတင်စရာ, အထက်ပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအများစုရှားပါးဖြစ်ကြပြီးဖြစ်ကောင်းပညာရှိ dosing. နှင့်အတူရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်